Etu esi ewepu spam anyị na-enweta site na kalenda iCloud | Esi m mac
Esi ewepu spam anyị na-enweta site na kalenda iCloud
N'oge na-adịbeghị anya, ndị spammers achọtala ọwa nkwukọrịta ọhụrụ: òkù ihe kalenda na kalenda iCloud anyị. Spam a abụghị ihe egwu nye kọmputa anyị ma ọ bụ akaụntụ iCloud, mana ọ na-akpasu iwe na n'otu oge ahụ, ụzọ iji kpochapụ ya abụghị ihe omimi dịka ọ bụrụ na ọ bụ email.
Ndị ọrụ emeela mkpesa na ịnata akwụkwọ ịkpọ oku n'ụlọ ahịa ndị a: "Ray-Ban", "Oakley", "Louis Vuitton" ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị China. Na ụkpụrụ, onye ọrụ ọ bụla nwere Apple ID, ma ọ bụrụ na ị na-eji ya na ngwaọrụ gị, Nwere ike ịdaba "anụ oriri" n'ụdị ụdị ozi a achọghị.
Anyị nwere ikike anyị nwere ọtụtụ ụzọ iji zere spam na kalenda anyị iCloud, obughi ezigbo azịza, ma melite njikwa kalenda anyị ruo mgbe Apple tinyere ihe:
Nhọrọ mbụ: Nyefee ọkwa na email:
Ọ bụghị ikpeazụ, ma zere manụ ificationsma Ọkwa. N’ụzọ dị iche, ọ bụrụ na anyị anata amamọkwa kalenda, a gaghị anabata ha ọzọ abughi. Iji rụọ ọrụ ya:
Nweta weebụsaịtị iCloud, www.icloud.com ma tinye ID gi.
Pịa na gia na ala aka nri.
Gaa na taabụ "Di elu". N'okpuru ị ga - ahụ ngalaba "Akwụkwọ ịkpọ oku" wee lelee igbe dị n'akụkụ "Zipu site na email address@email.com" chekwa na ọ bụ ya!
Nhọrọ nke abuo: Bugharịa amamọkwa na kalenda "junk" ma hichapụ.
Nhọrọ a na-agwụ ike, n'ihi na ị ga-eme ya oge ọ bụla ị nwetara ọkwa, mana ị na-ezere ịjụ ịkpọ oku ma yabụ onye spam ahụ ga-agwụ ike izipu ha n'ihi na ọ na-eche na adreesị anaghị arụ ọrụ. Ga-agbaso usoro ndị a.
Mepee ngwa kalenda.
Mepụta kalenda ọhụrụ, nwere aha na-egosipụta ya, dị ka «Kalịnda ahịhịa».
Bugharịa akwụkwọ ịkpọ òkù nke ihe omume ị chọghị kalenda gị.
Ihichapụ kalenda na mmapụta window ọ na-egosi "Hichapụ ma ghara igosi".
Tinyegharịa nzọụkwụ 2 na 4 oge ọ bụla ị natara akwụkwọ ịkpọ oku.
Nhọrọ nke atọ: jụ ịkpọ òkù na kalenda.
Mgbe anyị natara ọkpụkpọ oku, anyị nwere ike ịsị: nabata, nwee ike, ma ọ bụ jụ. Nhọrọ kachasị mma bụ anaghị anabata. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị eme ihe ọ bụla ọzọ, mana ị na-agwa spam generator na akaụntụ ahụ na-arụ ọrụ ma ị nwere ike ịkwalite ibu gị.
Ọ bụ eziokwu na mkpa ịkpọ oku a, ma ọ dịkarịa ala ugbu a, dị ntakịrị. Ma Apple kwesịrị nip ya na nwa osisi ozugbo o kwere omume. Ruo ugbu a pụtara mkpa nke The New York Times o CNBC ha ekwuputala ozi ọma. Yabụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị nsogbu dị oke mkpa, n'ezie Apple na-amụ otu esi akwụsị mbupu ndị aIkekwe n’enweghị anyị hụrụ, kalenda kalenda yiri email nzacha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Esi ewepu spam anyị na-enweta site na kalenda iCloud
Ọ dị mfe dị ka apụl dị ka enyere nhọrọ iji gbochie ngosi ahụ, nke anaghị adị ugbu a. Ọ bụrụ n'ịjụ ịkpọ oku, ị na - egosi onye na - ewepụta ya na akaụntụ ahụ dị ma bawanye ọnụ ọgụgụ spam natara.
Anyị ga-ahụ oge ole ha na-ewere Apple n'ihi na ha anaghị arụ ọrụ nke ọma.
VLC ga - enye gị ohere igwu egwu vidiyo vidiyo 360, ị nwere ike ibudata beta ugbu a